Isizwe sibambe umoya ngeziNsephe - Bayede News
Emva kweminyaka engaphezulu kweli-10 kungekho nelilodwa iqembu lakuleli elifi ka kowamanqamu okanye linqobe umqhudelwano omkhulu, aMabhokobhoko asethubeni wokuthi avale lowo mkhokha.
ISpar Proteas okuyiqembu lenetball liphume endaweni yesine kweYoMhlaba eyayibanjelwe e-England, eLiverpool. Iqembu lekhilikithi iProteas laphuma emidlalweni yamaphuzu kweYoMhlaba, iBanyana Banyana yona okuyiqembu likanobhutshuzwayo yawashiswa ijezi ekuseni kuyo iNdebe YoMhlaba. Nyakenye iBafana Bafana ayingenanga ngisho nokungena emqhudelwaneni weYoMhlaba eRussia.
AMabhokobhoko aqeqeshwa uRassie Erasmus azotholana phezulu kowamanqamu ne-England kusasa, e-International Stadium Yokohama ngehora le-11 ekuseni ngesikhathi sakuleli. Unompempe waseFrance uJerome Garces uyena ozodlalisa lo mdlalo ozobe ubhekwe umhlaba wonke. UGarces kuzoba okwesithathu edlalisa umdlalo obandakanya aMabhokobhoko kulo mqhudelwano. Wawadlalisa neNew Zealand waphinde wawadlalisa kowamasemi-fi nal ebhekene neWales. Uzobe elekelelana noRomain Poite waseFrance, uBen O’keeffe noBen Skeen baseNew Zealand.
I-England eqeqeshwa u-Eddie Jones akukhona okokuqala idlala umdlalo wamanqamu walo mqhudelwano. Isiwudlale kathathu, ngowe-1991 yabhekana ne-Australia neyanqoba ngamaphuzu ali-12 kwayisithupha, ngowezi-2003 yabhekana nayo futhi i-Australia (iWallabies) yaziphindiselela inqoba ngamaphuzu angama-20 kwali-17. Kuthe ngowezi-2007 yabhekana naMabhokobhoko anqoba ngamaphuzu ali-15 kwayisithupha.
Elakuleli kusukela ngonyaka we- 1987 kusungulwa lo mqhudelwano selidlale kabili kowamanqamu ngowe-1995 nangonyaka wezi-2007. Ngowe-1995 labhekana neNew Zealand layihlula ngamaphuzu ali-15 kwali-12, ngowezi-2007 labhekana ne-England elayiguqisa ngamaphuzu ali-15 kwayisithupha.
Umlando uvuna elakuleli phakathi kwala mazwe. KweYoMhlaba asetholane emidlalweni emine yonke inqotshwa aMabhokobhoko. Ngowezi-1999 etholana kumaquarter-fi nal anqoba ngamaphuzu angama-44 kwangama-21, ngowezi-2003 emdlalweni wamaqoqo anqoba ngamaphuzu angama-25 kwayisithupha, ngowezi-2007 anqoba emdlalweni wamaqoqo ngamaphuzu angama-36 eqandeni aphinde anqoba kowamanqamu ngamaphuzu ali-15 kwayisithupha.Emlandweni usuwonke la mazwe asetholane phezulu emidlalweni engama-42, aMabhokobhoko anqobe engama-25 i-England yanqoba eli-15 adlala ngokulingana kwamabili.
Ngesikhathi elakuleli linqoba lo mqhudelwano ngowezi-2007 uJones wayeyisekela mqeqeshi likaJake White, okwenza abe nalo ulwazi ngaMabhokobhoko.
Ekhuluma nabezindaba uJones uthe: “AMabhokobhoko ayiqembu elikhulu, umlando uyasiphika uma sibhekene nawo. Iqembu labo linabadlali abondlekile futhi abanamava, kuzoba nzima ukuthi sibahlule ikakhulukazi esiwombeni sesibili njengoba kuyisona ababa yingozi kuso. U-Erasmus ungumqeqeshi ongusomaqhinga, usesebenze kakhulu kumaMabhokobhoko”.
UTendai “Beast” Mtawarira okungumdlali osedlale imidlalo engaphezulu kweli-100, uthe uyayisaba i-England. “I-England idlala kahle kakhulu, indlela edlala ngayo izokwenza sithwale kanzima. Indlela abadlale ngayo ngeledlule ikhombise ukuthi abalona iqembu ongaleya, kunalokho kumele uzimisele kakhulu. Okwenzeka eminyakeni edlule akusho lutho njengamanje, okumele sikwenze ukuthi sinqobe emdlalweni wakusasa. Njalo uma sidlala nayo kuhlale kuwumdlalo okusebenza kuwo amandla, nakulokhu angiboni kuzoshintsha,” kusho uBeast.
UBeast oyiprop uthe usekujahile ukubhekana nezikhondlakhondla zase- England uMako Vunipola oyiloosehead prop noKyle Sinckler oyitighthead prop.
Umdlalo wokubanga eyethusi okuyindawo yesithathu uzokuba namhlanje phakathi kweNew Zealand neWales eToyko Stadium, ngehora le-11 ngesikhathi sakuleli.
Indlela yaMabhokobhoko eze efi ke kowamanqamu
Emidlalweni yamaqoqo anqoba imidlalo emithathu ahlulwa kowodwa yiNew Zealand.
Kumaquarter-fi nal ahlula iJapan engosokhaya ngamaphuzu angama-26 kwamathathu.
Kumasemi-fi nal abe esehlula iWales ngamaphuzu ali-19 kwali-16
Indlela ye-England ize ifi ke kowamanqamu
Emidlalweli yamaqoqoqo yanqoba emithathu yadlala ngokulingana kowodwa.
Kumaquarter-fi nal yaguqisa i-Australia ngamaphuzu angama-40 emaphuzwini ali-16.
Kumasemi-fi nal yashaya ompetha iNew Zealand ngamaphuzu ali-19 kwayisi-7.
Amaqembu aseke anqoba lo mqhudelwano kusukela ngowe-1987
Ngowe-1987 iNew Zealand.
Ngowe-1995 iNingizimu Afrika.
Ngowe-1999 i-Australia .
Ngowezi-2007 iNingizimu Afrika
2011 nangowezi-2015 i-All Blacks (iNew Zealand) kwaba yiyo enqoba lo mqhudelwano.
*Umdlalo wamanqamu uzoboniswa kuSupersport 1 nakuSABC 2
nguQhelani Msweli Oct 31, 2019